Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 12/12/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 12/12/2019
မြန်မာ့သတင်းအကျဉ်းချုပ် (အင်္ဂလိပ်+မြန်မာ) အား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
(နေပြည်တော်၊ ၁၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက်)
Eleven family members return to Taung Pyo Letwe Reception Centre in Maungtaw
Two families of 11 displaced persons returned on their own volition to Taung Pyo Letwe Reception Centre in Maungtaw Township, Rakhine State yesterday.
The in-charges of Taung Pyo Letwe Reception Centre have scrutinized the family members, and five of them, two men and three women, aged 10 years and above were issued NV cards by the immigration department. They were also provided with aids.
The camp in-charge Deputy Director U Soe Tun handed them over to Hla Phoe Khaung transit camp where they were welcomed by in-charge of Hla Phoe Khaung camp Director U Soe Shwe Aung and officials, and provided with foods and other items including kitchen utensils.
The two families of 11 people were transported to their place of origin Nga Khu Ya village in Maungtaw together with village leader U Gaw Gyi Aung of Nga Khu Ya Village-tract in the evening.
U Zaw Zaw San, U Myint Khaing, U Thet Lwin Soe(IPRD)
မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပြိုလက်ဝဲပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းသို့ မိမိတို့ဆန္ဒအရ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသည့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းများအတိုင်း စိစစ်လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ
မောင်တော ဒီဇင်ဘာ ၁၁
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပြိုလက်ဝဲ ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်း၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက မိမိတို့ဆန္ဒအရ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် နေရပ်စွန့်ခွာသူ အိမ်ထောင်စုနှစ်စု ကျား ငါးဦး၊ မ ခြောက်ဦး လူဦးရေ ၁၁ ဦးအား ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက စိစစ်လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ လက်ခံဆောင်ရွက်ရာတွင် ရှေးဦးစွာ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများက သတ်မှတ်နေရာ၌ တစ်ဦးချင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သည်။
ထို့နောက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ စိစစ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအား ဆောင်ရွက် ရာတွင် အိမ်ထောင်စုနှစ်စုရှိ အသက် (၁၀)နှစ်အထက် ကျားနှစ်ဦး၊ မသုံးဦးပေါင်း ငါးဦးတို့အား NV Card ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်ကာ ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ် အား မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ တောင်ပြိုလက်ဝဲ ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်း တာဝန်ခံ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးထွန်းက လှဖိုးခေါင်ယာယီနေရာချထားရေး စခန်းသို့ လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ရာ လှဖိုးခေါင် စခန်းတာဝန်ခံ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးရွှေအောင်နှင့် စခန်းတာဝန်ရှိသူများက လွှဲပြောင်းလက်ခံ ဆောင်ရွက်ကြပြီး ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ အိမ်ထောင်စုနှစ်စု လူဦးရေ ၁၁ ဦးတို့သည် ယခင်နေရပ် မောင်တောမြို့နယ် ငါးခူရကျေးရွာမှဖြစ်ပြီး ငါးခူရကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဂျီအောင် အား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကာ ညနေ ၄ နာရီ တွင် စခန်းမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွားကြောင်း သိရသည်။
ဇော်ဇော်ဆန်း ၊ မြင့်ခိုင်၊ သက်လွင်စိုး (ပြန်/ဆက်)